Turkiga: "Khaashuqji waa la ceejiyey, ka dibna waa la jarjaray" - BBC News Somali
Khashuqji wuxuu ahaa nin wax ku qora wargeyska Washington Post
Dacwad soo oogaha Turkiga, Irfan Fidan, ayaa sheegay in kulan uu la yeeshay Isniintii dhiggiisa Sacuudiga aysan ka soo bixin "natiijo wax ku ool ah".
Hadalka uuTurkiga soo saaray ayaa yiri "si waafaqsan qorshayaashii hore loo sameeyey, ayaa dhibbanaha, Jamaal Khaashuqji, waxaa lagu qabtay ceego ilaa uu ka dhintay, isla markii uu galay qunsuliyadda guud ee Sacuudi Caraabiya".
Meydkiisa ayaa ka dib la jarjaray, lana burburiyey "mar kale si waafaqsan qorshe hore looga shaqeeyey" ayaa lagu sii daray.
Sacuudigu markii hore wuu beeniyey inuu og yahay geerida, isagoo sheegay in Khaashuqji - oo ah nin aad loogu yaqaanno inuu dhaliilo dawladda - uu ka baxay dhismaha isagoo nool, ka dib markii uu u yimid kulan.
Ka dib, ayuu dalkaas khaliijka ku yaalla qirtay in dilka Khaashuqji uu ahaa mid hore loo sii qorsheeyey, ahaana natiijada "hawlgal kharriban". Waxay sheegeen inay xireen 18 qof oo laga shakisan yahay, kuwaasoo lagu maxkamadayn doono Sacuudiga.
Boqorka Sucuudiga oo ka tacsiyeeyay Dilka Jamaal Khaashuqji
Ciqaabta uu Sucuudiga ku muteysan karo dilka Jamaal Khaashuqji
Turkiga muxuu ka yiri?
Mas'uul dawladda Turkiga ka tirsan oo aan magaciisa la shaacinin ayaa wuxuu warbaahinta u sheegay inuu Turkigu hayo caddeymo cod ah oo duuban oo muujinaya dilka Khaashuqji loo dilay.
Jamal Khashoggi's fiancee: "We didn't say any goodbyes"
Sacuudigu muuxu ka yiri?
Marka xigtayna waxay sheegeen "koox arxan laawayaal ah" iney dilka Khaashuqji geysteen ayuu Sacuudigu qirtay.
Sawirro muujinaya munaasabadda aaska Amiir Philip